musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kudengenyeka kwenyika muCalifornia Nevada: 5.9
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kudengenyeka kwenyika kune simba kunoitika kuchamhembe kweJapan
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba 5.9 pachiyero kwakanyorwa pa3.52pm muNevada, padhuze neCalifornia State Line paSmith Valley.
Kudengenyeka kwenyika kwakayerwa muSmith Valley, Nevada, paCalifornia, Nevada State line na5.9: 3 pm Pacific TIme nemusi weChina.
Kudengenyeka kwakanzwika muReno, Carson City neStockton.
Hapana kukuvara kukuru kana kukuvara kunotarisirwa nekuda kwenzvimbo iri kure kudengenyeka kwenyika.
Smith Valley inzvimbo yakasarudzwa yekuverenga vanhu muLyon County, Nevada, United States. Huwandu hwevanhu hwaive chiuru nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nenomwe pakaverengwa kwevanhu muna 1,603.
Mono County idunhu riri kumabvazuva-pakati chikamu cheUS state yeCalifornia. Sezvakaverengwa mugore ra2010, huwandu hwevanhu hwaive 14,202. zvichiita kuti ive yechishanu-isina vanhu vakawanda mudunhu muCalifornia. Chigaro chedunhu Bridgeport
Nyamavhuvhu 8, 2021 kudengenyeka kwenyika kwaive pamuganhu pakati pematunhu maviri. Kudzika kwakayerwa kwaive mamaira makumi matanhatu nenomwe.